China T-bolt ine chitubu clamp Mugadziri uye Mafekitori | Glorex
MAHARA KUSVIRA PASI PESI NEZVINHU zveBhasiHNell
Bhizinesi rekuvandudza nhoroondo
American mhando hose clamp
British mhando hose clamp
Germany mhando hose clamp
Kuongorora kwemhando yepamusoro
T-bolt ine chitubu chemvura
Iyo T-bolt ine chitubu chematsime inowedzera zvitubu pane yenguva dzose T-bolt clamp kuti igare yakakura kubatana ukuru hwakasiyana, ichipa yunifomu chisimbiso kudzvinyirira uye yakavimbika chiitwa chekuita.
Iyo inogona zvakare kuve neye inorema-basa chitubu, uchienzanisa neyakajairika chitubu, yakakodzera kwazvo pombi yekubatanidza neyakakwira-simba inorema midziyo.
Kudhindisa kwepeteni kana laser kudhindisa.
Iyo yakajairika kuisirwa muhomwe yepurasitiki, bhokisi bhokisi kunze. Label ichave iri pabhokisi.
Tine yakakwana yekuongorora system uye yakasimba kunaka mhando. Izvo zvakona zvekuongorora zvekushandisa uye vashandi vese vane hunyanzvi vashandi vane zvakanakisa zvekuzviongorora zvekugona. Imwe neimwe tambo yekugadzira inoshongedzwa nenyanzvi yekuongorora.
Iyo kambani ine motokari dzakawanda dzekufambisa, uye yakamisa hukama hwekudyidzana kwenguva refu nemakambani makuru ekugadziridza zvinhu, Tianjin Airport, Xingang uye Dongjiang Port, ichibvumidza kuti zvinhu zvako zvigoviswa kune kero yakatarwa nekukurumidza kupfuura nakare kose.
Yakajairika T-bolt ine chitubu chemvura inoshandiswa kuenzanisa nerabhesi hose yekubatanidza injini yedhiziri. Kurema-basa chitubu chakakodzera kutama kwakakura kwemotokari dzemitambo uye formula racing injini hose kubatana.
Kutanga Kukwikwidza Kubatsira:
T-bolt ine chitubu mashizha ane hunhu hwekumhanyisa kurodha nekukurumidza, kupusa kusasasanisa, yunifomu yekushambadzira, yakanyanya kudzoreredzwa uye inogona kupfupikiswa nekwavo nehuremu hwehose kuti isvike pakubata. Yakagadzirirwa kutenderera kwakanyanya uye dhayamita hombe inowanzozivikanwa mumarori anorema, mishini yekumaindasitiri, michina yemigwagwa, kudiridza kwekurima uye michina.
pcs / katoni
Yepfuura: Irubber (yekugadzirisa macamp)
Robust inosunga nemaviri
Robust inosunga ne solid trunnion